Topnews:-Maamulaha Hormuud Telecom oo heysta Afar British Passport iyo Jiboutian.
Sunday July 19, 2020 - 14:57:58 in Warar by Super Admin
Feeylka Socdaalka Ahmed Mohamud Yuusuf oo ah Maamulaha Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa lagu diiwaangeliyay Afar Passport oo British ah iyo Passport Number Jiboutian .
Afarta Passport ayaa leh Numbero kala duwan. laakiin lamma ogga iney yihiin Passports ay leeyihiin Xaaskiisa, Caruurtiisa ama Saaxiibadiis oo Immigration-ka u diiwaangeliyay.
1- Passport 1-aad afarta Xaraf ee ugu dambeysa waxey kala yihiin :- 3000, wuxuu dhacayaa Passport-kaan 30/05/2027.
2- Passport 2-aad afarta Xaraf ee ugu dambeysa waxey kala yihiin:- 5812, wuxuu dhacayaa Passport-kaan 23/04/2024.
3- Passport 3-aad afarta Xaraf ee ugu dambeysa waxey kala yihiin :- 8120. wuxuu dhacayaa Passpor-kaan 23/04/2024.
4- Passport 4-aad afarta Xaraf ee ugu dambeysa waxey kala yihiin :- 5772, wuxuu dhacayaa Passport-kaan 07/11/2022.
5- Passport-ka 5-aad oo Jiboutian ah waxaa ugu dambeysa :- 4825
Muuqaal Warbaahinta Waagacusub heshay waxaa ka soo dhexmuuqda Ahmed Yuusuf oo ay la socdaan haween iyo isagoo dhexmaraya Immigration kala duwan.
Maamulaha Hormuud Telecom oo u dhashay beesha Murusade Hawiye waxey Shirkadda uu maamula argagixisadda Al-Shabaab siisaa lacagta ugu badan ee Canshuurta .sidoo kalena waxey Al-Shabaab u ogolaatay iney lacagaha baadda ku aruursadaan Bankigooda Salaam Somali Bank iyo Akoonadda EVC PLus oo loo furay Limit u sahlaya in loogu diro kumanaan kun oo dollar, sida baaris ku ogaadeen Wariyeyaasha Waagacusub.
Laba ka mida Maamulka Hormuud Telecom ayaa 14 October 2017 waxey soo gudbiyeen baabuur qarax ku raran kaas oo isku qarxiyay Agagaarka Zope ee Muqdisho.
Baabuurkaas isqarxiyay waxaa ku dhintay dad ka badan kun qof ,sidoo kalena kun iyo seddex boqol ayaa ku dhaawacantay.
Maamulahii Hormuud Telecom Xasan Muxyadiin Bustooladda weyne ayaa sidoo kale lagu qabtay Villa Somalia xilli uu baabuur ku soo galay dableey ka tirsan argagixisadda Al-Shabaab kuwaas oo qaraxyo waaweyn la beegsaday Masuuliyiinta Dowladda Federalka Somalia.
Ahmed Mohamud Yuusuf oo loo yaqaan Axmed Sacuudi wuxuu Muqdisho ku xiray haweeneey Somalia oo heysata dhalashadda Ingiriiska taas oo la yiraa Muxubo Shiilaale, wuxuu maamulaha haweeneyda u xiray inuu ka dhaco Guri ay ku leedahay Muqdisho, dhabarka dambe ee Hotel Sahafi ,sida ay telefoonka iigu sheegtay iyadoo joogta Uk.
Maamulaha Hormuud Telecom Mr Ahmed Yuusuf wuxuu sidoo kale xiray Cabdi Saciid Nuur Faarax Bacadle oo iska hortaagay inuu xoog ku qabsado degaanka Muure oo uu leeyahay ganacsade Ibrahim Uunlaaye.
Maxamuud Shire Warsame oo muuqaal uu soo duubay soo dhigay baraha bulshadda ayaa sheegay in dhul Nus boos ah uu xoog uga qaatay Maamulaha Hormuud Telecom Mr Ahmed Yuusuf. wuxuuna maamulaha diiday inuu aqbalo go’aanka Maxkamadda sida ku cad warqadaha ka soo baxay Maxkamadda gobolka Banaadir.
Hormuud Telecom waxey maamushaa inta badan xafiisyadda Al-Shabaab iyo Dowladda, waxaana dhawaan la helay Meydka iyo Cod si sira looga duubay Wakiilkoodii Xaafadda Daarusalaam Siciid Geelle Rooble oo lagala baxay Masjid ku yaal Garasbaaleey Muqdisho kadibna inta la dilay meel lagu Aasay isagoo labada gacmood ka xiran.
Codka sirta ee laga duubay Siciid Geelle maalin ka hor intaan la dilin wuxuu ku sheegay inuu dib goofleeyda Daarusalaam ugu celin doono dhulkoodii maadama uu heshiiska uga baxay Nin la dhashay Gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Nur Cali Jimcale kaas oo la yiraa Cumar Cali Jimcale.